मध्यरातको निर्णयपछि विद्या भण्डारी पुनः राष्ट्रपति बन्ने निश्चित, कहिलेसम्म हुन्छ शितल निवासको बास? – www.agnijwala.com
मध्यरातको निर्णयपछि विद्या भण्डारी पुनः राष्ट्रपति बन्ने निश्चित, कहिलेसम्म हुन्छ शितल निवासको बास?
एमाले स्थायी कमिटीको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मध्यरात अबेरसम्म बसेको बैठकले शितल निवासका उत्तराधिकारीको टुङ्गो लगाएको छ। राति १२ बजेर ३५ मिनेटमा प्रदीप ज्ञवालीले ट्विट गरे- “राष्ट्रपति निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उमेदवारीलाई समर्थन गर्ने पार्टी स्थायी कमिटीको १०१ औं बैठकको निर्णय।” योसँगै झलनाथ खनाल लगायतकाको राष्ट्रपति आकांक्षा तुहिएको छ। वाम गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत भएकोले राष्ट्रपति निर्वाचन अब औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदैछ। भण्डारीको कार्यकाल अहिलेको संसदको कार्यकाल ५ वर्ष सकिएपछि पनि कायम रहनेछ। नजित्ने निश्चित भए पनि कांग्रेसले भण्डारीको उम्मेदवारीको विरोध गर्दै आफूले पनि उम्मेदवारी दिने भएको छ। के ऐनले भण्डारीको उम्मेदवारीलाई छेक्छ त?
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नका लागि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार यी ५ शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ-
(१) सबैभन्दा पहिला त नेपाली नागरिक हुनुपर्‍यो, त्यो पनि वंशजको आधारमा। अर्थात् बुबा नेपाली नागरिक भएको आधारमा पाएको नागरिकता हुनुपर्‍यो। भण्डारी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकी व्यक्ति हुन्। उनको नागरिकता नम्बर ३७६८/११८४ हो।
(२) कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्‍यो। उनको उमेर ५६ वर्ष हो।
(३) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्‍यो। उनको नाम बूढानिलकण्ठ नगरपालिकामा रहेको छ-
उनी वर्तमान राष्ट्रपति हुन्। यो लाभको पद हो कि हैन त? ऐनमा लाभको पदको अर्थ निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक भनिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद हो। त्यसैले पाँच वटै शर्त उनले पूरा गर्न सक्छिन्।
विद्या भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल वर्तमान संसदको भन्दा लामो हुनेछ। संसदको कार्यकाल सकिएर अर्को चुनाव भइसकेपछि अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएसम्म उनी राष्ट्रपति कायम रहने छिन्। अर्थात् २०७९ सालसम्म उनी नै राष्ट्रपति हुनेछिन्।
концепция продвижения брендаpoloninaизовыйанализ позиций сайтациклевка поламедийная реклама rtb